Duulimaadyada Caalamiga ah oo dib uga bilaawday Garoonka Aadan-Cadde - Awdinle Online
Waxaa si rasmi ah duulimaadyadooda dib u billaabay shirkadaha diyaaradaha Turkish Airline, Ethiopian Airways iyo Uganda Airline kuwaasoo hakiyay duulimaadkooda Garoonka Aadan Cadde maalin ka hor.
Sababaha ay duulmaadyada u hakiyeen shirkadaha diyaaradaha ayaa waxaa ay ku sheegeen arrimo dhanka amniga ah, kaidb markii shaqaaqooyin u dhaxeeyay Ciidamada dowladda iyo kuwoay wateen Midowga Musharixiinta ay ka dhaceen Magaalada Muqdisho.
Wasiirka Gaadiidka Cabdullaahi Salaad Oomaar oo ku sugan Garoonka ayaa sheeggay in Maanta ay dib u bilaawdeen duulimaadyada Caalamiga ah, isla markaana ay si caadi ah u Shaqeeynayaan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in ay si caadi ah u socdaaan Duulimaadyada ay Muqdisho ku imaanayaan diyaaradaha Djibouti Air, Hala Airlines, Daalo iyo diyaaradaha hay’adaha caalamiga ah sida WFP, UN.
Shaqaaqooyinkii ka dhacay Magaalada Muqdisho maalin ka hor ayaa waxaa ay saameyn ku yeesheen shaqada Garoonka diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada muqdisho kadib markii uu ku dhacay mid kamid ah hubkii labada dhinac ay isku ridayeen.
Previous articleWasiir Dubbe “Imaaraadku wuxuu rabaa in Soomaaliya ay noqoto sida Liibiya iyo Yemen”
Next articleKenya oo bedeshay dhamaan qareenadii u doodayay dacwada badda ee kala dhexeeysa Somalia